Mmebi Ụwa Ò Ruwela?​—⁠Gịnị Ka Baịbụl Kwuru?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Pangasinan Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Wolaita Xhosa Yoruba
Ihe Doomsday Clock na-ekwu agaghị emezu n’ihi na Chineke ekwela ụmụ mmadụ nkwa maka ọdịnihu dị mma, kwuokwa na a gaghị ebibi ụwa anyị a
ISIOKWU TETA! A | MMEBI ỤWA Ò RUWELA?
KEMGBE ọtụtụ narị afọ gara aga ka Baịbụl buru amụma gbasara ihe ndị na-eme taa. O kwukwara na ihe ga-emecha dịrị ụmụ mmadụ ná mma n’ọdịnihu. Anyị ekwesịghịkwa ileghara ihe Baịbụl kwuru anya n’ihi na e nweela ọtụtụ amụma Baịbụl mezurunụ otú ahụ o si buo ya.
Ka anyị lebatụ anya n’ụfọdụ n’ime ha:
“N’ihi na mba ga-ebuso mba ọzọ agha, alaeze ga-ebusokwa alaeze ọzọ agha, a ga-enwekwa ụkọ nri na ala ọma jijiji n’ebe dị iche iche.”—Matiu 24:7.
“Ma mara nke a, na n’oge ikpeazụ, a ga-enwe oge dị oké egwu, nke tara akpụ. N’ihi na ndị mmadụ ga-abụ ndị hụrụ naanị onwe ha n’anya, ndị hụrụ ego n’anya, ndị na-anya isi, ndị mpako, ndị nkwulu, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, ndị na-enweghị ekele, ndị na-adịghị eguzosi ike n’ihe, ndị na-enweghị obi mmadụ, ndị na-adịghị achọ inwe nkwekọrịta ọ bụla, ndị nkwutọ, ndị na-adịghị ejide onwe ha, ndị na-eme ihe ike, ndị na-adịghị ahụ ezi ihe n’anya, ndị na-arara mmadụ nye, ndị isi ike, ndị nganga fụliri elu, ndị hụrụ ihe ụtọ n’anya kama ịbụ ndị hụrụ Chineke n’anya.”—2 Timoti 3:1-4.
Amụma ndị ahụ na-ekwu gbasara ụwa a ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ na-achọ imebi emebi. Ma, e nwere ike ikwu na ụwa e mebiela nke na ụmụ mmadụ agaghị emezitali ya. Baịbụl na-ekwu na ụmụ mmadụ enweghị amamihe ma ọ bụ ikike ha ga-eji kwụsị ihe ọjọọ. Amaokwu Baịbụl ndị na-esonụ gosiri na ọ bụ eziokwu:
“E nwere ụzọ nke ziri ezi n’anya mmadụ, ma ụzọ ọnwụ ka nsọtụ ya ga-emecha bụrụ.”—Ilu 14:12.
‘Mmadụ achịwo mmadụ ibe ya ọchịchị nchịgbu.’—Ekliziastis 8:9.
“Ọ dịrịghị mmadụ . . . ọbụna iduzi nzọụkwụ ya.”—Jeremaya 10:23.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ anọgide na-eme otú masịrị ha, ihe ndị ha mepụtara nwere ike ịla ụwa n’iyi. Ma, nke ahụ enweghị ike ime eme. N’ihi gịnị? Lee ihe Baịbụl kwuru gbasara ya:
Chineke ‘tọrọ ntọala ụwa mee ka o sie ike; ọ gaghị ama jijiji ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ruo mgbe niile ebighị ebi.’—Abụ Ọma 104:5.
“Otu ọgbọ na-ala, ọgbọ ọzọ na-abịakwa; ma ụwa na-adịru ọbụna mgbe ebighị ebi.”—Ekliziastis 1:4.
“Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 37:29.
“Ọka ga-ejupụta n’elu ụwa; ọ ga-ejubiga ókè n’elu ugwu dị iche iche.”—Abụ Ọma 72:16.
Ihe ndị a Baịbụl kwuru doro anya. Ikuku e metọrọ emetọ, ụkọ nri, ụkọ mmiri, ma ọ bụ ọrịa na-efe efe agaghị ala ụmụ mmadụ n’iyi. A gakwanụghị eji agha ọgwụrụ mba bibie ụwa anyị a. N’ihi gịnị? N’ihi na ọ bụ Chineke ka ihe niile gbasara ọdịnihu ụwa a dị n’aka. Chineke hapụrụ ụmụ mmadụ ka ha na-ekpebiri onwe ha ihe ha ga-eme. Ha na-erikwa uru ma ọ bụ nweta nsụ si ná mkpebi ha pụta. (Ndị Galeshia 6:7) Ụwa a adịghị ka ụgbọ okporo ígwè n’enweghị njite na-aga ịkpọkasị n’oge na-adịghị anya. Chineke agaghị ekwe ka ụmụ mmadụ bibie ụwa a.—Abụ Ọma 83:18; Ndị Hibru 4:13.
Ma, Chineke ga-emekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ ga-eme ka e nwee “udo nke zuru ebe niile.” (Abụ Ọma 37:11) Ihe ọma ndị e kwuru gbasara ha n’isiokwu a, bụ naanị ole na ole n’ime ọtụtụ ihe nde Ndịàmà Jehova mụtara na Baịbụl ga-eme n’ọdịnihu.
Ndịàmà Jehova bụ otu ezinụlọ zuru ụwa ọnụ, nke jupụtara n’ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ afọ ndụ dị iche iche, sikwa n’agbụrụ dị iche iche. Onye ha na-efe bụ naanị otu ezi Chineke ahụ, onye Baịbụl mere ka a mata na aha ya bụ Jehova. Ha anaghị atụ ụjọ ọdịnihu n’ihi na Baịbụl kwuru, sị: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, bụ́ Onye kere eluigwe, Onye bụ́ ezi Chineke, Onye kpụrụ ụwa na Onye kere ya, Onye mere ka o guzosie ike, onye na-ekeghị ya n’efu, onye kpụrụ ya ka e biri n’ime ya: ‘Abụ m Jehova, e nweghị onye ọzọ.’”—Aịzaya 45:18.
Isiokwu a lebara anya n’ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru gbasara ihe ga-eme ụwa a na ụmụ mmadụ n’ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu gbasara ihe mere Chineke ji kee ụwa a, gụọ isi nke 5 na broshọ Ozi Ọma Si n’Aka Chineke! Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. Ọ dịkwa na www.jw.org/ig
I nwekwara ike ịnọ na www.jw.org/ig lee vidio aha ya bụ Gịnị Mere Chineke Ji Kee Ụwa? (Pịa ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE, pịzie VIDIO)